» ‘मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन’
१० असार २०७६, मंगलवार २२:०७
‘ठूलो र सानो यो भेदभाव ठालुले चलाए
गरिबको श्रम लुटेर खाने चलन चलाए
काम गर्ने सानो, काम ठग्ने ठूलो म भन्दै भन्दिनँ
जाती र पाती छुट्याउने रीतलाई म मान्दै मान्दिनँ ।’
माथिका शब्दहरूको माध्यमबाट नै शम्भु राई बोलिरहेका छन । उनले व्यक्तिगतरूपमा आबेग, ईर्ष्या र प्रतिशोधले प्रकाश सपूतमाथी जाईलागे भन्नू किमार्थ साँचो हुन सक्दैन । सायद उनीलो प्रोफाईलमा बसेर संघर्ष गरेका सालिन स्रष्टा हुन । उनी के कति कारणले आफ्नो लयरभाका कपी गरेर अपमान महसुस गर्दै कानूनीबाटो लिए त्यो उनैले जान्ने कुरा भो । त्यस्तै प्रकाश सपूत पनि गरिबीले उत्पन्न गरेको कारुणिक पीडा र संघर्षको मैदानबाट उदाएका राम्रा स्रष्टा हुन भलै प्रकाश सपूत केही बजारिया मसला मन पराउछँन।
शालिनताका धनी शम्भु राईले किन मन ठुलो बनाएर माफी दिएनन् र प्रकाश सपुतले पनि किन आफ्नो केही गल्ती (चाहे अन्जान होस वा संयोग ) स्वीकार गर्दै आत्माआलोचना गरेनन् भन्ने विषय आफैमा अचम्म छ । किन आपसी समझदारीमा विवादलाई बिट मारिएन ? के यो क्षमा दिन सक्ने वा माफी माग्न नहुने खालको अपराध थियो त ?
तर आज हामी त्यही विवादलाई पक्ष र विपक्षमा किन अर्को विवादको सिर्जना गर्दैछौ ? सबै जातजातीको आ-आफ्नो मौलिकता र पहिचान हुँदाहुँदै किन ठूलो जात र सानो जातको अराजक कुस्ती खेलिरहेका छौ ? कानूनीले बन्देश र कुनै बैज्ञानिक अर्थ नबोक्ने यो जातको भिन्नतामा किन आज सामाजिक संजाल यति दुर्घन्दित हुँदैछ ?
शम्भु सर र प्रकाश जि तपाईंहरु फुट्दा सिङ्गो समाज फुट्दैछ । यो विवाद केवल तपाईंको मात्रै विवाद र समस्या भएन यसले समग्र समाजलाई टुटाउदैछ । आपसी भाईचारा र सद्भाव भड्काउदैछ । तपाईंहरुको मन बाझिदा यहाँ कयौ भड्काउहरुका नाङ्ले पसल चल्न थालेका छन । गालीगलौज, अपशब्द, तेरो , मेरो गर्दै थालिएका अनावश्यक हानथापले तपाईंहरु मात्र विवादित हुनु भएको छैन यहाँ कयौं मानिसहरुले यहि मेसोमा अरुको उछितो काँढिरहेका सम्मान छन् । एक आपसमा लडिरहेका छन । कहिल्यै नटुङ्गिने र अर्थहिन उपल्लो जात र तल्लो जातको पगरीमा मानिसले आफ्नो परिचय बिर्सिएका छन ।अरुको सम्मान र अस्तित्वलाई होच्याएर आफूलाई महान देखाउने खेल केबल राजनीतिमा देखिदै आएको थियो त्यो डरलाग्दो पैठोजोरी क्रमशः समाज र सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन थालेको छ ।
जातको आधारमा अरुप्रती अपशब्द बोल्ने, होच्याउने र छेडछाड गर्ने आचरणले के साच्चिकै हामीलाई चेतनशील प्राणी वा पृथ्वीको उन्नत प्राणी भन्न दिन्छ ? कुन स्वाभिमान र अहंकारले आफूले आफैंलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी ठान्छौ जब कि हाम्रो सोच नै कुण्ठाग्रस्त छ । बदनियत छ । तसर्थ शम्भु राई सर मन ठूलो बनाएर प्रकाश भाइलाई आफ्नो अङ्गालोमा बाधेर माफी दिनुहोला र खबरदारी गरिदिनुस- ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुदैन। ’
#जातिय भेदभाव होइन सद्भाव बाढौ ।